ဖွင့်လှစ် ပိတ် တာဝန် rotary လျှပ်စစ် actuator ပေးသွင်း နှင့် ထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ အလုပ်ရုံ - AOX
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > လျှပ်စစ် Actuator > Rotary လျှပ်စစ် Actuator > ဖွင့်လှစ် ပိတ် တာဝန် rotary လျှပ်စစ် actuator
ဖွင့်လှစ် ပိတ် တာဝန် rotary လျှပ်စစ် actuator
AOX-R ကို စီးရီး ဖွင့်လှစ် ပိတ် တာဝန် rotတစ်ဦးry လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ဖြစ် အသစ် ဒီဇိုင်းရေးဆွဲ နှင့် ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဘို့ အဖွင့်အပိတ် သေးငယ်သော ဘောလုံးကို / plug ကို vတစ်ဦးvles နှင့် dတစ်ဦးmper အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု.AOX-R ကို ကို စီးရီး ဖွင့်လှစ် ပိတ် တာဝန် rotတစ်ဦးry လျှပ်စစ် တစ်ဦးctuတစ်ဦးသို့r ရှိ ဖူး mတစ်ဦးstering အဆိုပါ နည်းပညာ ၏ အခင်အရှင် အလိုအလြောကျစကျတပျဆငျမှု စက်မှုလုပ်ငန်း ဘို့ ဆယ်စုနှစ်များ။ ရွေးချယ်ခြင်း AOX ဖြစ် တစ်ဦး pr၏essionတစ်ဦးl ရှေးခယျြမှု။ ကျွန်တော်တို့ ရှိ first-clတစ်ဦးss ကုန်ပစ္စည်း နည်းပညာ နှင့် pr၏essionတစ်ဦးl R & D teတစ်ဦးm သို့ ပေး သငျသညျ နှင့် တစ်ဦးppropriတစ်ဦးte ဒီဇိုင်း။
သက်ဆိုင်ဆို့ရှင်: Ball ကို Valve (DN15-DN200); လိပ်ပြာ Valve (DN25-DN400)
ISO5211 / DIN3337 မှတစ်ခွင်, လွယ်ကူသော mounting အခြေစိုက်စခန်းစံ: AOX-R ကိုစီးရီးများအတွက် 2. က ISO 5211 mounting အခြေစိုက်စခန်းအနီးကပ်တာဝန် rotary လျှပ်စစ် actuator ဖွင့်လှစ်။
3. သိမ်းသွားခြင်းကိုခံရသောအဖုံးတုံး: ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုသို့မဟုတ်တပ်ဆင်ခစဉ်အတွင်းမူလီဆုံးရှုံးကာကွယ်တားဆီးဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲအဆိုပါမူလီ waws ။
4. မော်တော်: AOX-R ကိုစီးရီး၏မော်တာအနီးကပ်တာဝန်ဖွင့်လှစ် rotary လျှပ်စစ် actuator inertia အင်အားသုံးအတွက်သေးငယ်တဲ့ torque အတွက်ကြီးမားသောအရွယ်အစားသေးငယ်တဲ့အရာအပြည့်အဝပူးတွဲရှဉ့်လှောင်အိမ်မော်တာ, ချမှတ်နှင့်ရှိပါတယျ insulator တွင်လည်းလူတန်းစားအက်ဖ်ဒါဟာ built-in ဖြစ်ပါတယ် ယင်းမော်တာမှထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှကာကွယ်ရန်ကာကွယ်မှု switch ကို overheat ။
AOX-R ကိုစီးရီးအနီးကပ်တာဝန်ဖွင့်လှစ် rotary လျှပ်စစ် actuator ၏စက်မျက်နှာပြင်အဘယ်သူမျှမ burrs နှင့်မျှမသဲတွင်းရှိပါတယ်။ အတွင်းအခန်းထဲသို့ကိုယ်ထိလက်ရောက်ကုသနှင့်ဓါတ်တိုးခြင်းနှင့်ကိုအလွယ်တကူ corroded မပြုပါ။
AOX-R ကိုစီးရီးအဆို့ရှင်နှင့်အတူ mounting rotary လျှပ်စစ် actuator ကျယ်ပြန့်သောရေကိုကုသရာတွင်အသုံးပြုသည်အနီးကပ်တာဝန်ဖွင့်လှစ်, အပူ, ရေနံ, ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း, လျှပ်စစ်ပစ္စည်း, အလင်းစက်မှုလုပ်ငန်း, အစားအစာ, ဆေးဝါး, အထည်အလိပ်, စက္ကူချမှတ်ခြင်း, ရေအားလျှပ်စစ်, သင်္ဘောများ, ရောစပ်အသစ်စွမ်းအင်နှင့် အခြားအလယ်ကွင်း။
အဆိုပါကုမ္ပဏီနည်းပညာသုတေသနနှင့်ထုတ်ကုန်အသစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နည်းပညာကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရန်ပုံငွေပမာဏကြီးမားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ AOX အဖွဲ့သည်လုံးဝ 98 utility ကိုမူပိုင်ခွင့်ရရှိခဲ့, ကြှနျုပျတို့ဆန်းသစ်တီထွင်မှုအပေါ်စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ငါတို့ AOX-R ကိုစီးရီးအနီးကပ်တာဝန် rotary လျှပ်စစ် actuator ဖွင့်ဘို့အထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောအရည်အသွေးကိုစံထွက်သယ်ဆောင်မည်, ပြည်တွင်းတွင်တီထွင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုးထား, ဉာဏပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှုကိုလေးစား။
မေး: အနီးကပ်တာဝန် rotary လျှပ်စစ် actuator ဖွင့်လှစ် AOX-R ကိုစီးရီးမှာဘယ်လိုနေသလဲ?
မေး: သင် AOX-R ကိုစီးရီး၏စတော့ရှယ်ယာအနီးကပ်တာဝန် rotary လျှပ်စစ် actuator ဖွင့်လှစ်ရှိပါသလား?
hot Tags:: ဖွင့်လှစ် ပိတ် တာဝန် rotary လျှပ်စစ် actuator, တရုတ်, ထုတ်လုပ်သူ, ပေးသွင်း, စက်ရုံ, အရည်အသွေး, advanced, Classy, နောက်ဆုံးပေါ်